တွမ်မျောက်ဥငါးပိအာရှချက်ပြုတ်ဟင်းချိုအတွက်ရေပန်းအစားဆုံး၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအခြေစိုက်စခန်းနှင့်ပူဝက်အူချောင်းတစ်ဗဟုအဖြစ်အသုံးပြုနှင့်အခြားဟင်းလျာများကိုထည့်သွင်းထားသည်။ သင်, သင်တန်း၏, ထိုဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်တွင်ကုန်ပစ္စည်းဝယ်နိုင်ပေမယ့်လည်းအိမ်မှာကချက်ပြုတ်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူ။ ထို့အပွငျကလုံးဝမခက်ခဲသည်ဖြစ်စေ, သင်ရုံက၎င်း၏ဖန်ဆင်းခြင်း၏ပရိယာယ်နှင့်ဒြပ်ပေါင်းများအချို့နှင့်နည်းပညာတွင်းသောငါးပိများဖွဲ့စည်းမှုကိုသိရန်ရှိသည်။
ငရုတ်ကောင်းငါးပိဟင်းချိုတွမ်ယမ်း - စာရွက်
အနီရောင်ငရုတ်သီးအလတ်အရွယ်အစားသီးတောင့် - 10 PCs ။
ကြီးမားသောဦးခေါင်းကြက်သွန်ဖြူ - 1 pc ။
မီးသီးကြက်သွန်နီ - 85 ဂရမ်,
ဖွာဂျင်းအမြစ် - သေးငယ်တဲ့ဇွန်းလျှောနှင့်အတူ5နာရီကြာ ;.
သံလွင်ဆီ ပထမဆုံးထုတ်ယူခြင်း - 55 ml ကို;
ပင်လယ်ဆား -3လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ..
Tom မျောက်ဥငါးပိအားလုံးကိုလိုအပ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်. , ရော်ဘာလက်အိတ်ပေါ်မှာသင့်လက်၌ချပြီးကျနော်တို့က၎င်း၏ပြင်ဆင်မှုကိုတိုက်ရိုက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။ ဆေးရေကို run အေးမြအောက်မှာအနီရောင်ငရုတ်သီးငရုတ်ကောင်း၏သီးတောင့်, သူတို့ကို obsushivayut နှစ်ခုရှက်သို့အလျားဖြတ် peduncles နှင့်အတူအစေ့ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ အခုဆိုရင်ထုတတ်နိုင်သမျှ diced ဇာတိပကတိငရုတ်ကောင်းခုတ်။ ထိုနည်းတူ shinkuem ခုနှစ်တွင်ပြားသွားများသို့မီးသီးကြက်သွန်နီနှင့်ကြက်သွန်ဖြူဖြတ်သန့်စင်။ တစ်ဦးကဂျင်းအမြစ်အသေးစား grater သို့ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်။
အခုတော့တစ်ဦးဒယ်အိုးထဲမှာအထဲတွင်အပိုအပျိုကညာသံလွင်ဆီနဲ့ကြက်သွန်ဖြူ Lay ပူနွေးလာသည်။ ယာယီပန်းကန်ပေါ်သေးငယ်တဲ့ဘရောင်းနဲ့ဖမ်းရန် Passeruem ပန်းကန်။ အလားတူပဲကျနော်တို့ကြက်သွန် Cube နှင့်အတူရှေ့ဆက်။ အခုတော့မွှေးရေနံငရုတ်သီးငရုတ်ကောင်းပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ပျော့ပျောင်းသောသည်အထိစဉ်ဆက်မပြတ်စိတျလှုပျရှားဖှယျမှာကြော်။ ယခုငါတို့ဒယ်အိုးဖို့ကြက်သွန်နှင့်ကြက်သွန်ဖြူပြန်လာနှင့်မကြာခဏနှိုးဆော်, မိနစ်အနည်းငယ်များအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအတူတူတက်ခဲ့သည်။
ဒါဟာမြည်းစမ်းဖို့စင်ကြယ်သော texture နဲ့ဆားသည်အထိတစ်ဦး Blender အတွက်သတ်အံ့သောငှါ, သာအနည်းငယ်လှော်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အအေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤသည်ငါးပိဿုံခြောက်လပိတ်သိမ်းတစ်ဖန်အိုးတလုံးထဲမှာရေခဲသေတ္တာထဲမှာသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။
ပြင်ဆင်မှု galangal, ထုံးများနှင့်သံပုရာမြက်ထဲမှာမကြာခဏဖြည့်စွတ်ကြောင်းဤသို့သောအခြေခံစာရွက်မျောက်ဥငါးပိ။ သို့သော်မကြာခဏလုပ်ပေးထက်ငါးပိများအတွက်အခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုသည်ဆိုပါက, ထို ထိုင်းဟင်းချို များနှင့်အခြားဘာမျှမ။ မပြောင်းလဲက၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများကို - ဤအရာအလုံးစုံအစိတ်အပိုင်းများပြီးနောက်။ နှင့်ဝက်အူချောင်းအောင်နှင့်မူရင်းဗားရှင်းအပေါ်နေဖို့ပိုကောင်းသည်အခြားဟင်းလျာများသို့ငါးပိထည့်သွင်းသည်။
ငါးပိများအသုံးပြုမှုဟာတွင်းဖြစ်ပါသည်ထိုင်းအစားအစာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်။ ယင်း၏အကျွမ်းတဝင် Home-ချက်ပြုတ်စားသောက် Complementing, သင်သည်သူတို့၏အသစ်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရသာများကအံ့သြပီတိဖြစ်လိမ့်မည်။ အဓိကအရာ - အကောင့်ထဲသို့ထုတ်ကုန်များ၏ပြင်းထန်မှုယူနှင့်ကအနည်းငယ်သုံးစွဲဖို့။
အဆိုပါ ratatouille ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဂျြောဂြီယနျအတွက် Chakhokhbili ကြော်ကြက်သား
အသားနှင့်အတူ Cannelloni - စာရွက်
အခြောက်လှန်း sirloin - စာရွက်
အခွံမာသီးအဘို့အ Form ကို
ကြော်ဂေါ်ဖီထုပ် - စာရွက်
အနီရောင် Currant ဂျယ်လီ - စာရွက်
ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
အတ္ထုပ္ပတ္တိဇနီး Salma Hayek
အဆိုပါ urethra ထံမှ smear
တစ်ဦး platform ပေါ်တွင်ဖိနပ်များ - နှစ်ဦးစလုံးကိုခေါ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဝတ်ဆင်နည်း
နီကိုးလ် Kidman ဆီလီကွန်ရင်သားကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့တယ်အဘယ်ကြောင့်ဒါဟာသင်ယူခဲ့သည်
သူမသည်တစ်ဦးက Twitter selfie posted နှင့်လောကဓာတ်လုံးကိုမျက်နှာပျက်ခြင်းရှိကြ!